Zvinyorwa zvaDave Hodgson pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Dave Hodgson
Dave Hodgson ndeye North America mutengesi uye wekuparadzira director we Zeiss Multimedia Midziyo, boka riri mukati mevatengi zvigadzirwa divi reZeiss, vanogadzira lensera yekamera, maboniboni uye zviyero. Midziyo yeMultimedia inosanganisira iyo Zeiss VR Imwe mahedhifoni uye anouya anopfeka zvigadzirwa zvine hunyanzvi lenzi.
Kuwedzera kweVR kweVR mukutsikisa uye Kushambadzira
Chitatu, Ndira 3, 2018 Dave Hodgson
Kubva kutanga kwekushambadzira kwazvino, mabrands akanzwisisa kuti kuumba kubatana nevashandisi vekupedzisira ndiko musimboti wezano rekushambadzira rakabudirira - kugadzira chimwe chinhu chinomutsa manzwiro kana chinopa chiitiko kazhinji chine fungidziro isingaperi. Nevashambadziri vachiwedzera kutendeukira kudigital uye nhare mbozha, kugona kubatana nevashandisi vekupedzisira nenzira yekunyudza kwakaderera. Nekudaro, chivimbiso chechokwadi chaicho (VR) sechiitiko chekunyudza chiripo